teôria fanamafisana induction - mpanamboatra milina fanamafisam-peo | vahaolana fanafanana fampidirana
ny teôlôjian'ny hevi-baovao
Ny fandroana ny induction dia ny fizahana entona mamono zavatra elektrika (mazàna amin'ny vy) amin'ny alàlan'ny fiasan'ny elektromagnetika, amin'ny alàlan'ny hafanana vokarina ao anatin'io zavatra io.
Sokajy Technologies Tags fototry ny hafanana fanalefahana, induction heating, Fototry ny fanorana, fanamafisana ny famokarana induction, ny teôlôjian'ny hevi-baovao
ahoana no fomba fiasan'ny indostria?
Loharanom-pamokarana mahery vaika no ampiasaina hitondra fiara manodidin-dàlana amin'ny alàlan'ny indrafo. izany Indonezianina fanalefahana dia fantatra ho toy ny fanodinana asa. Jereo ny sary mifanohitra amin'izany.
Ny fizotry ny ankehitriny amin'ny alalan'ity Indonezianina fanalefahana dia mamorona angovo maitso sy haingam-pandeha haingam-pandeha eo amin'ny sehatry ny asa fanodinana. Ny fitaovana entina am-patana dia napetraka ao anatin'io sehatra maoderina io.
Miankina amin'ny natioran'ny fitaovam-piasana, zavatra maromaro no mitranga…
Ny famolavolan-java-manelanelana dia miteraka ambaratongam-pamokarana misy ankehitriny ao anatin'ilay fitaovana fitanterana. Ny fandaminana ny fanodidinan'ny asa sy ny fitaovana dia azo raisina ho toy ny transformer elektrika. Ny bobodin'ny asa dia toy ny loharano izay ahafahan'ny herinaratra angonina, ary ny fitaovana dia toy ny singa tokana mihemotra izay tsy voafehy. Izany dia miteraka kiran-dava goavana hivezivezena amin'ny alalan'ny fitaovana. Ireo dia fantatra amin'ny anarana mahazatra.
Ankoatra izany, ny haavo dia ampiasaina amin'ny Induction Heating Ny fampiharana dia miteraka zava-mitranga antsoina hoe skin. Io fihenan'ny hoditra io dia manery ny fiovan'ny toetr'andro izay mikoriana ao anaty lafy matevina manoloana ny endriky ny fitaovana. Ny fihenan'ny hoditra dia mampitombo ny fanoherana mahomby amin'ny metaly mankany amin'ny andalan-jiro lehibe. Noho izany dia mampitombo ny vokatra fanasitranana amin'ny indostria induction heater vokatry ny voina hita ao amin'ny fitaovana.
[pdf-embedder url = "https://dw-inductionheater.com/wp-content/uploads/2018/08/induction_heating_principle-1.pdf" lohateny = "induction_heating_principle"]
Sokajy Technologies Tags fototra iasan'ny asa fanasitranana, induction heating, fanamafisana ny famokarana induction, ny teôlôjian'ny hevi-baovao, fanasitranana hafanana